eNasha.com - अँगालो ? यो पनि सित्तैमा
अँगालो ? यो पनि सित्तैमा
सिड्नीमा अहिले मध्यदिन भएको छ । अष्ट्रेलियाली सबैभन्दा व्यस्त व्यवसायिक यो शहरमा मध्यदिन हुनुको अर्थ हो, सबैलाई खाना खाने हतारो । सबै अफिस थलोबाट हुर्रिएर खानाका लागि बाहिर निस्किरहेका छन् । यत्तिकैमा 'फ्री हग्स' प्लेकार्ड बोकेका जुआन मन देखिन्छन् र यो प्लेकार्ड देख्ने बित्तिकै मानिसहरु उनलाई अँगालो मार्न दौडिएर आइपुग्छन् ।
आफ्नो अँगालो सित्तैमा अरुलाई दिइरहेका जुआनले यस्तो गर्न थालेको पनि तीन वर्ष भइसक्यो । हरेक बिहीबार उनी शहरबाहिर निस्कन्छन्, आफ्नो अँगालो सित्तैमा दिनलाई । त्यसो त शुरुका दिनमा यिनलाई आफ्नो अँगालो सित्तैमा बाँढ्दासमेत केही व्यक्तिले नराम्रो नजरले हेरे । कत्तिले त बौलाहासमेत ठाने । तर जब जुआनको यो अभियानबारे विस्तारै चाल पाए, जनताहरु अहिले उनलाई आफ्नै घरको सदस्यझैँ व्यवहार गर्छन् ।
अहिले त उनी सिड्नीका सबैभन्दा परिचित व्यक्ति भएका छन् । उनको 'अँगालो कथा' चर्चित वेबसाइट युट्यूबमा छिरेपछि त उनको लोकप्रियता झनै चौगुना भएको छ । "अहिले मसँग जसले अँगालो मार्छ, उनीहरुले युट्यूबमा उनीहरुले हेरेको भिडियोको चर्चा पनि गर्छन् । खासगरी, कुन व्यक्तिले कसरी अँगालो हाल्यो भनेर", मुसुमुसु हाँस्दै उनले एएफपीसँग भने- "अहिले त अन्तर्रराष्ट्रिय रुपमा मलाई बधाई आइरहेको छ अभियानका बारेमा ।"
हलुका दाह्री पालेका, गोरो काया र अग्लो कदका उनले यो अभियान तब शुरु गरे, जब सन् २००४ मा लामो यूरोप बसाईपछि अष्ट्रेलिया फर्किए । यहाँ उनका आमा-बुवाको पारपाचुके भइसकेको थियो र यहाँको एकान्तिक जीवन देखेर उनी घण्टौँ रोए । त्यसपछि उनलाई यस्तो लाग्यो- मजस्तै एक्लो अनुभव गर्नेहरुको बाक्लै संख्या होला ! त्यसपछि उनले बिल्कूलै अनजान व्यक्तिहरुसँग अँगालो साट्ने अभियान शुरु गरे ।
"म एक्लो थिएँ । मेरो परिवार छरपष्टिएको थियो । मेरो बच्चादेखिका साथीहरु सबै आ-आफ्नो काममा व्यस्त थिए । म मात्र एक्लो थिएँ । मैले नै केही गर्नुपर्ने महसूस गरेँ", प्रख्यात अँगालो सट्टेबाज जुआन मनले अनुहार गम्भीर बनाउँदै भने । रोचक त के छ भने उनको वास्तविक नाम जुआन मन हुँदै होइन । बरु उनले आफैँले राखेको नाम हो यो । जसको एक्लो व्यक्ति भन्ने अर्थ लाग्छ ।
"महिनौँ मैले केही नसोची/केही नगरी बसेँ । मात्र संसारलाई हेरिरहेँ । मसँग धेरै मान्छेको सम्पर्कसूत्र थिएन । मेरो सम्पर्क मात्र थियो मसँग । अनि सोचेँ, म अब पाइला अघि बढाउँछु र केही नयाँ काम गर्छु"- 'एक्लो मान्छे'ले बताए ।
त्यसो त उनलाई यो अँगालो अभियानबाट उति धेरै आशा पनि थिएन । उनले सोचेका थिए, मात्र आधा घण्टाको अभियान शुरु गर्नेछु । "मैले अरुबाट अँगालोको आशा गर्दा सबैभन्दा खराब स्थिति कल्पेको थिएँ कि कसैले मेरो गालालाई थप्पडले सजाइदिनेछ", जुआन मनले त्यो दिन सम्झे । तर १५ मिनेटपछि एउटी महिला उनीनजिक आइन् र उनलाई विस्तारसँग आज बिहानैमात्र उनको प्यारो कुकुर मरेको सुनाइन् । त्यसपछि उनकी प्यारी छोरी आजकै दिन मरेको एक वर्ष पुगेको भनिन् । त्यसपछि उनले भनिन्, 'यी दुइ पीडा खप्न मेरो मुटु पर्याप्त छैन के तिमी मलाई सघाउँछौ ?' यसपछि जुआनको आँखामा आँशु आयो । केही सेकेण्डका लागि यिनले आफ्नो पीडा बिर्सिए । "यो मात्र अँगालो थिएन, त्योभन्दा बढी नै थियो ती महिलाका लागि पनि र मेरालागि पनि !" जुआनले बताए ।
त्यसपछि यो अभियान सफलतापूर्वक चलिरहेको छ । कतिसम्म भने उनलाई सघाउन केही व्यक्तिसमेत सामेल हुन थालेका छन् । सिड्नी ब्याण्डका गायक सिक पपिज्, सिमोन मूरजस्ता प्रख्यात व्यक्ति उनका साथी बनिसकेका छन् । उनको युट्यूब भिडियो १ करोड ४० लाख पटक हेरिसकिएको छ । (त्यसमध्ये यो अनुवादक पनि एक पर्छ ।) कतिसम्म भने उनको यो अभियानलाई ताइवान, जापान, फ्रान्सदेखि पेरुमा समेत प्रयोग गर्न थालिएको छ ।
यो अँगालोले उनलाई हरेक व्यक्तिले भेटेर उनीहरुले जीवनमा गरेका गल्ती र अँगालो अभियानले पाएको उपलब्धिसमेत बताउने गरेका छन् । यो अभियानलाई त कतिले विज्ञको सल्लाहभन्दा सफल मानिरहेका छन् ।
अँगालो बाँढ्ने यो अभियान भने कतिलाई मन परेन । केही व्यक्तिले यो अभियान व्यक्तिको स्वास्थ्यका लागि खराब हुन सक्ने र ज्यान मार्नसमेत सजिलो हुने भनी प्रहरीमा सूचित गरेपछि अष्ट्रेलियाली अधिकारीहरुले यो अभियान रोक्न जुआनलाई धम्की दिएका थिए । तर यो अभियानका हिमायतीहरुले त्यसो नगर्न उल्टै १० हजार व्यक्तिको हस्ताक्षर सङ्कलन गरी सरकारलाई दवाव दिए ।
उनको लामो घुम्रेका कपाल, हलुका बढेको दाह्री, शुभ्र काया र कहिलेकाहीँ उनको श्वेत वस्त्रका कारण व्यक्तिहरुले अर्को जिसस क्राइट (येशू ख्रिष्ट) भनी बोलाइरहेका पनि भेटिन्छन् । यस्तो कुरा केही धार्मिक व्यक्तिलाई कसरी रुच्थ्यो ? उनलाई यस्तो कार्य नगर्न धम्की पनि दिइसकेका छन् ।
आफ्नै देश र अन्य देशमा समेत आफ्नो अभियानलाई केही व्यक्तिहरुले रुचाएपछि उनी आफ्नो अँगालो संसारभरका व्यक्तिहरुलाई बाँढ्नेबारे सोचिरहेका छन् । तर इन्टरनेटको माध्यमले उनलाई पछाडि धकेलिदियो । उनले यो सोचेका मात्र थिए, अन्य देशमा समेत अभियान शुरु भएका खबरहरु आइरहेका छन् । (देशहरु माथि उल्लेख गरिसकियो क्यार !)
रोचक त के छ भने उनलाई यति धेरै इमेलहरु विश्वभरबाट आइरहेका छन्, अँगालोको साटो अहिले उनी इमेलको जवाफ पठाइरहेका छन् । उनले भने- "हरेक मेरा इमेल-जवाफहरु अँगालोसरहका छन् । हरेक दिन चार घण्टा एउटा अनजान देशको अनजान व्यक्तिलाई तिनको समस्यामाथि छलफल गर्दै समाधान पेश गरिरहेको हुन्छु ।"
अनि, उनले अँगालो मार्न बन्द भने गरेका छैनन्, हरेक बिहीबार उनी हलुका बैजनी रंगको कमिज लगाएर कहिले सपिङ मल त कहिले ससाना गल्ली त कहिले पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा अँगालो बाँढ्दै हिँडिरहेका भेटिन्छन् ।
केही महिलाले त उनलाई कतिसम्म गर्छन् भने- दौडेर आउँछन्, उनका लागि ल्याइदिएको 'लन्च बक्स' तेर्‍स्याउँदै भन्ने गर्छन्- "जुआन, मलाई त तिमीले अंकमाल गर्‍यौ, तर के मेरो 'स्याण्डवीच'लाई अंकमाल गर्न सक्छौ ?"
यस्तो पनि ! माया उपाय सुन्दरी सेलेब्रिटी बलिउड गुगल मूर्ख्याइँ भव्यता विज्ञापन मुद्दा मामिला नग्नता इन्टरनेट परिस्थिति फट्याइँ श्रीमानश्रीमती उदेकलाग्दो कीर्तिमान हलिउड प्रविधि